Shan qof oo dhimatay xilli xulka Colombia ay u dabaal deggeysay usoo bixitaankii Koobka Aduunka – idalenews.com
Shan qof oo dhimatay xilli xulka Colombia ay u dabaal deggeysay usoo bixitaankii Koobka Aduunka
Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay Bogota ka dib markii ay teegeereyaasha Colombia u dabaal deggeen usoo bixitaankii xulkooda ee Koobka Aduunka 2014ka.
Los Cafeteros ayaa sameysay dib usoo kabsasho heer sarre ah, iyadoo usoo baxday Koobka Aduunka ee sanadka soo aadan ka dhici doona Brazil, xilli goolkii Carlos Carmona iyo labadii rigoore ee Radamel Falcao ay ka caawiyeen inay dib ugu soo dagaalamaan kulankii ay 3-0 uga hugaamineysay Chile ee ugu dambeyn barbar dhaca kusoo dhamaaday.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo taageerayaasha ay farxadi ka muuqatay ka dib markii ay Koobka Aduunka usoo bexeen markii ugu horeysay muddo 16 sano ah, sida lagu soo waramayo dabaal deggii ayaa dad naftooda ku waayeen ka dib qalalaase dhacay.
Sida ay sheegayaan warbixino rasmi ah, ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay caasimadda Bogota, iyadoo sedax ka mid ah xabbado lagu dilay, halka labada kale ay ku dhinteen isku dhayo dhexmaray taraafikada, xilli in ka badan 2,000 oo qof ay la dagaalameen booliska ka dib dabaal deggayii guushii xulkooda.
Wiilasha Jose Pekerman ayaa ka mid ah afarta xul ee sida tooska ah uga soo bexeysa Conmebol iyagoo fadhiya kaalinta labaad ka dib markii ay 27 dhibcood ka shaqeysteen 15 kulan, waxayna 5 dhibcood ka dambeeyaan xulka kaalinta 1aad kusoo baxay ee Argentina.
Maamulka Somaliland oo madax-xanuun ka qaaday Haddal kasoo yeeray Dowladda Mareykanka.
Dowladda Itobia oo ka hadashay qarixii maanta ee Addis Abeba iyo soomaali ka dambeysay